Isicwangciso sovavanyo kunye nesicwangciso sovavanyo
Eyona Qa Isicwangciso sovavanyo kunye nesiCwangciso sovavanyo
Uxwebhu lweQhinga lovavanyo luxwebhu oluphezulu kwaye luqhele ukwenziwa ngumphathi weprojekthi. Olu xwebhu luchaza 'Indlela yoVavanyo lweSoftware' ukufezekisa iinjongo zovavanyo.
Isicwangciso sovavanyo sihlala sithathwa kuxwebhu lweeNkcukacha zeMfuno zoShishino.
Uxwebhu lweQhinga lovavanyo luxwebhu olumiyo oluthetha ukuba aluhlaziywa rhoqo. Imisela imigangatho yeenkqubo zokuvavanya kunye nemisebenzi kunye namanye amaxwebhu afana nesiCwangciso soVavanyo etsala imixholo yawo kuloo migangatho ebekwe kuXwebhu lweSicwangciso soVavanyo.
Ezinye iinkampani zibandakanya 'Indlela yoVavanyo' okanye 'Isicwangciso-qhinga' ngaphakathi kwesiCwangciso soVavanyo, esilungile kwaye ihlala kunjalo kwiiprojekthi ezincinci. Nangona kunjalo, kwiiprojekthi ezinkulu, kukho uxwebhu olunye lweQhinga lovavanyo kunye nenani elahlukileyo leziCwangciso zovavanyo kwisigaba ngasinye okanye inqanaba lovavanyo.
Izinto zoxwebhu lweSicwangciso sovavanyo
Ubume kunye neenjongo
Unxibelelwano kunye nengxelo yobume
Imigangatho yoshishino emayilandelwe
Uvavanyo oluzenzekelayo kunye nezixhobo
Imilinganiselo yokuvavanya kunye neetriki
Umngcipheko kunye nokuncitshiswa
Isiphene sokunika ingxelo kunye nokulandela umkhondo
Utshintsho kunye nolawulo lwesimo
Uxwebhu loCwangciso loVavanyo kwelinye icala, luvela kwiNkcazo yeMveliso, iSoftware yokuChaza i-SRS, okanye Sebenzisa amaXwebhu amaNqaku.
Uxwebhu loCwangciso loVavanyo luhlala lulungiswa nguMkhokeli woVavanyo okanye uManejala woVavanyo kwaye ugxininiso loxwebhu kukuchaza ukuba uvavanye ntoni, uvavanya njani, uza kuvavanya nini, kwaye ngubani oza kwenza olo vavanyo.
Akuqhelekanga ukuba neSicwangciso sovavanyo esinye esiyixwebhu eliqhelekileyo kwizigaba zovavanyo kwaye isigaba ngasinye sovavanyo sinamaxwebhu eSicwangciso soVavanyo.
Kukho ingxoxo mpikiswano, malunga nokuba uxwebhu lweSicwangciso sovavanyo kufuneka kwakhona lube luxwebhu olungagungqiyo njengolu xwebhu lweQhinga lovavanyo olukhankanywe apha ngasentla okanye ukuba kufuneka luhlaziywe rhoqo ukubonisa utshintsho ngokwendlela yeprojekthi kunye nemisebenzi.
Olwam uluvo lolokuba xa isigaba sokuqala sovavanyo siqala kwaye uMlawuli woVavanyo 'elawula' imisebenzi, isicwangciso sovavanyo kufuneka sihlaziywe ukubonisa konke ukuphambuka kwisicwangciso sokuqala. Emva kwayo yonke loo nto, ukuCwangciswa noLawulo zizinto eziqhubekayo kwinkqubo yovavanyo olusesikweni.
Isicwangciso sovavanyo id
Iimpawu eziza kuvavanywa
Iimpawu zidlula okanye zisilele iikhrayitheriya
Indawo yovavanyo (iikhrayitheriya zokungena, iikhrayitheriya zokuphuma)
Abasebenzi kunye neemfuno zoqeqesho
Le yindlela esemgangathweni yokulungiselela isicwangciso sovavanyo kunye namaxwebhu esicwangciso sovavanyo, kodwa izinto zinokwahluka kwinkampani ukuya kwinkampani.
Yintoni uxwebhu loMgaqo-nkqubo wovavanyo?
Umgaqo-nkqubo wovavanyo luxwebhu olukumgangatho ophezulu kwaye uphezulu kulawulo lwamaxwebhu ovavanyo.
Injongo yoxwebhu loMgaqo-nkqubo woVavanyo kukumela ifilosofi yovavanyo lwenkampani iphela kunye nokubonelela ngomkhomba-ndlela elifanele ukuwulandelwa lisebe lovavanyo nokuwulandela. Kuya kusebenza kuzo zombini iiprojekthi kunye nomsebenzi wokugcina.
Ukuseta umgaqo-nkqubo ofanelekileyo wovavanyo ngabaphathi abaphezulu, kubonelela ngesakhelo esomeleleyo apho iingcali zovavanyo zinokusebenza khona. Oku kuya kunceda ekuqinisekiseni ukwandiswa kwexabiso lobuchule elilele kuyo yonke iprojekthi.
Iziqulatho zoXwebhu loMgaqo-nkqubo wovavanyo
Imibutho kufuneka icace ukuba kutheni bevavanya. Oku kuya kuba nefuthe kwintsalela yoxwebhu lomgaqo-nkqubo kunye neendlela ezichanekileyo zovavanyo ezikhethwe ngabaphathi bovavanyo kwinkqubo nakwinqanaba leprojekthi.
Ukusuka ekuqondeni ukuba kutheni kufunwa ukuvavanywa kunokwenzeka ukuba uchaze ukuba yintoni injongo yovavanyo ngaphakathi kumbutho. Ngaphandle kolu nxibelelwano lusisiseko iinzame zovavanyo zimiselwe ukusilela.
Umzekelo: 'Ukuqinisekisa ukuba isoftware iyazifezekisa iimfuno zayo'
2. Inkcazo yenkqubo yovavanyo
Kubalulekile ukuseka umbono oqinisekileyo malunga nenkqubo yovavanyo. Kuya kufuneka siphendule imibuzo efana nokuthi, ziziphi izigaba kunye nemisebenzi engezantsi eya kuthi ibandakanye inkqubo yovavanyo. Zeziphi iindima eziza kubandakanyeka kunye nolwakhiwo loxwebhu olunxulunyaniswa nomsebenzi ngamnye, kunye nokuba ngawaphi amanqanaba ovavanyo ekufuneka ethathelwe ingqalelo.
Umzekelo: “Zonke izicwangciso zovavanyo zibhalwe ngokungqinelana nomgaqo-nkqubo wenkampani”
Siza kuvavanya njani iziphumo zovavanyo, ngawaphi amanyathelo esiza kuwasebenzisa ukuqinisekisa ukusebenza kovavanyo kwiprojekthi?
Umzekelo: 'ukusebenza kwishishini lokufumana isiphoso emva kokukhutshwa kwayo'
Inqanaba loMgangatho ekufuneka liphunyeziwe:
Zeziphi iikhrayitheriya zomgangatho eziya kuvavanywa kwaye leliphi inqanaba lomgangatho le nkqubo ifunekayo ukufezekisa ngaphambi kokukhutshwa kwayo ngokubhekisele kwezi nqobo zokugweba?
Umzekelo: 'akukho zimpazamo zibukhali zibukhali phambi kokukhutshwa kwemveliso'
5. Indlela yenkqubo yoPhuculo loPhuculo
Kukangaphi kwaye nini ukuvavanya ukuba luncedo kweenkqubo ezikhoyo endaweni kwaye zeziphi izinto ezifuna ukuphuculwa kunye neendlela eziya kuthi zisetyenziselwe ukuphucula iinkqubo.
Umzekelo: 'iintlanganiso zokujongwa kwakhona kweprojekthi ziya kubanjwa emva kokugqitywa kweprojekthi'
IMotorola yazisa ngeMoto X yoVavanyo oluSulungekileyo lweMarshmallow yeVerizon, Sprint, kunye ne-US Cellular